ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: လွမ်းလို့ရေးတဲ့စာ
လှလှပပ ရသလေး တစ်ပုဒ်...
မင့်အစ်မတွက်တော့ ရှားပါးကုန် ဖြစ်နေတယ်။
အပြာရောင်လုံချည် မီးခိုရောင်ရှပ်စ်နဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ဒန်းကလေးက စီးကြိုတုန်း အုန်း.. ဟုန်း...
ခွေးအိုကြီးက ငါ့ကို ခေါင်းဝှေ့တိုး... ဟိုး..အိုး...
နာရီလက်တံကို ငုံ့ကြည့်တော့ ခွေးအိုကြီးက တုံးလုံးကြီးကွေးအေး..ဟေ
ဒူးအနည်းငယ်ကွေးပြီး ခါးလေးညွတ် ခါးပိုက်ထောင်အား ဘယ်လက်ဖြင့်ကိုင် ညာလက်ကို 45 ဒီကရီကွေး... ဘယ်ညာယိမ်းပြီး ရပ်စ် စတိုင်ဖြင့်ဆိုရန်။
သြော .. ညက အိပ်ရေးဝတယ်ပေါ့ .. ငါတော့ အိပ်ရေးပျက်တယ်ဟ .. ရုပ်ရှင်ကြည့်နေလို့ .. :D
မရေရာတဲ့ အနာဂတ် တစ်ခုကို မျှော်လင့်နေရ
လွမ်းလို့ရေးတဲ့စာက လွမ်းစရာလေး ...
အစအဆုံးဖတ်ပြီး စိတ်ထဲစွဲကျန်ရစ်တဲ့ စာတကြောင်းက
ခွေးပုကြီးတောင် တုံးလုံးကြီးခွေလို့ ... တဲ့။
အဟုတ်ပြောတာ ... အဲဒီလိုရေးတာ မျက်စိထဲ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကို မြင်သွားတယ်။
အပေါ်က မမေနဲ့ ကျနော်နဲ့လည်း မြင်တာချင်း တူနေပြီ ညီရေ့...၊ ခွေးကပုရတဲ့ကြားထဲ ကြီးက ကြီးနေသေး တယ်၊ အဲဒီခွေးက အိပ်တော့ တုံးလုံးကြီးများတောင် ခွေနေလိုက်သေး..၊ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီခွေးကိုတောင် ပြေးကြည့်ချင်လိုက်သေး...၊ :D
တစ်ပုဒ်လုံးရဲ့ အလွမ်းတွေက တကယ့်ကိုပဲ လှတယ်..။
စာလေး လာဖတ်တယ် မောင်မျိုး။ "အချစ်.... ကိုယ့် အတွက် ဘယ်နား မှာများ ပုန်းခို နေမှန်း မသိတဲ့ တန်ဖိုးကြီး အရာ တစ်ခု တန်ဖိုး ရှိချင် မှလည်း ရှိနိုင်မယ့် ခပ်ညံ့ညံ့ အပေါစား အရာ တစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့"
အင်း... မောင်မျိုး တစ်ယောက် တန်ဖိုး ရှိတဲ့ အချစ်စစ်နဲ့ အမြန်ဆုံး တွေ့ပါစေ။
လွမ်းလို့ ရေးတာလားဗျ ...
မောင်မျိုးဆီလာရင် ..ပေါ့ပေ့ါပါးပါးနဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းလေးအသစ်လေးတွေ
ဘေးနားက ခွေးပုအိုကြီးလဲ မနေရ၊ ငါးလေးတွေနဲ့ ဖုန်းလဲ မကျန်စေရ၊ စပယ်ပင်လေးလဲ ပါသေး၊ ခြင်ဆေးခွေလဲ ချန်မထားဘူး
တော်သေးတယ် အိပ်ပျော်သွားလို့ မအိပ်သေးရင် ဘာတွေ ထပ်ထည့်ဦးမယ် မသိဘူး
ဒါနဲ့ စကားမစပ် အိပ်မက်ထဲမှာ ငယ်ချစ်ဟောင်းနဲ့ ပြန်တွေ့တာ မမက်ဘူးလားး)
လွမ်းလို့ရေးတဲ့စာတော့ မဖတ်ပါရစေနဲ့ ခေါင်းစဉ်ပဲကြည့်သွားတယ်...
စံပယ်တွေ မြန်မြန်ပွင့်စေချင်ရင် အရွက်ရင့်တွေ ခြွေပေးရတယ် ကိုမျိုးရဲ့.... တစ်ရွက်ချင်း အသေအချာခြွေကြည့် မနည်း အလွမ်းသက်သာသွားမယ်..... စံပယ်တွေပွင့်ရင် အကြံပေးအရာရှိခန့်ပေါ့.....း)
သတိမထားမိတဲ့ လစ်ဟာနေတဲ့ အရသာတွေကို ပြန်တွေ့လိုက်ရတယ်၊
ဟိုက်,,,,စကားလုံးတွေက မိုက်လှချည်လား မောင်မျိုးရဲ့။ ဘာကို လွမ်းမှန်းမသိတာတောင် ဒီလောက်ထွက်လာတယ်နော်။ သိများသိရင်တော့??? :P ,,"သက်မဲ့ဒန်းလေးကတောင် နွေးထွေးမှုပေးနိုင်သေးရင် သက်ရှိတွေဆီက ဘာကြောင့်များနွေးထွေးမှုတွေ ပျောက်ဆုံးနေပါလိမ့်" ..အခုတလော ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒါပဲ တွေးမိနေတယ်ဗျာ,,,,
အင်းးးးးး ဖတ်ရင်းနဲ့ သနပ်ခါးရေကျဲလေးတောင် လွမ်းတယ်...:)
မလေး..... အစ်မလည်း အကြည်ဓာတ်လေး မြန်မြန်ပြန်ရပြီး ရသစာလေးတွေရေးနိုင်ပါစေဗျာ ။
မိုးယံ...မင်းကတော့ အတည်ကိုမရှိဘူးနော် ပြောင်စပ်စပ်နဲ့ လဒကောင်။
မိုးခါးး.....အင်း ထင်တယ် ထင်တယ်း)
ဆွေလေးမွန်....ကျေးဇူးပါ သူငယ်ချင်းပြောခဲ့ပေးတဲ့ နုတ်လေးတွေက ကျနော်ပေးချင်တဲ့မက်ဆေ့ထပ်တောင် လှနေသေးတယ် .
မမေ...ဟဟား ခွေပုကြီးလည်း လွမ်းစရာစာထဲထည့်ရေးလိုက်တာ မှန်သွားတာပေါ့ ။
ကိုညီ...တစ်ခါခါ ဘာမှန်းမသိပဲ အဲ့လို လွမ်းတတ်လို့ တစ်ခါမှမရေးဖူုးတဲ့ ခပ်ဆွေးဆွေးပုံစံလေးရေးကြည့်ုဖြစ်တာ လှတယ်ဆိုလို့နောင်လည်းရေးအုံးမယ် ခုရက်ပိုင်းစာတွေပဲရေးချင်နေတယ်ဗျ .
ရို့စ်.... ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ ။
ကိုအုပ်... အစ်ကိုအဲ့လိုပြောရင် ကျနော်ကြည်နူးတယ်ဗျ အပြင်းစားကြီးတွေရေုးဖို့လည်း မတတ်ပါဘူုးအစ်ကိုရာ အဲ့တော့ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်အသိဆုံးဆိုတော့ ရေးတဲ့စာတွေလည်း ကိူယ့်အကြောင်းတွေပဲဖြစ်နေတာပေါ့ ။.
မချော....ငယ်ချစ်ဟောင်းလား သူအိမ်ထောင်ကျသွာြး့ပီး အိပ်မက် မမက်ဖြစ်ပါဘုးဗျား) ခြင်ဆေးခွေမထွန်းရင် ခြင်တွေက တအားပေါလို့ မဟုတ်၇င် ခြင်တွေအကြောင်းပါထည့်ရေးဖြစ်မလားမသိ အိပ်မပျော်ရင်ပြောပါတယ် .။
လပြည့်ရိပ်...း) အဲ့လောက်ကြီးလည်း လွမ်းဖို့မကောင်းပါဘူး ဖတ်ကြည့်ပါအုံး ။
မေသိမ့်...ကျနော်လုပ်ကြည့်မယ်ဗျ ကျေးဇူးး အကြံပေးအရာရှိခန့်မယ် စံပယ်တွေပွင့်ရင် တင်အုံးမယ် စောင့်နေနော့် ။
မအပြုံးပန်း..အဲ့တာတွေက သာမန်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလွမ်းတွေပါပဲ တစ်ခါခါ ကိုယ်လည်း မေ့နေတတ်တယ်လေ ။
ညီသူအိမ်...ဟုတ်ပါ့ဗျာ ခွေပုကြီးက လူပိုပြောများနေတယ်း)
ဖြိုးကေခိုင်.... ၀ယ်လိမ်းလေ နွေမှာလိမ်းတော့ အေးတယ်ဗျ ။